Thwebula Classic Shell 4.3 – Vessoft
Thwebula Classic Shell
Classic Shell – a isofthiwe evumela ukuthi wena ukushintsha design of the menu isiqalo e Windows 7, 8 no Windows Windows 8.1. Isofthiwe ine a isethi elikhulu amathuluzi ukuze wenze menu isiqalo bese wamazwe kanye nekhono vumela noma vimbela umsebenzi wabo. Classic Shell wakha in the yamathuluzi wamazwe ukwenza imisebenzi, ezifana uya emsukeni, cut, ukopishe noma unamathisele intfo, sibonise izindawo kwifolda njll software futhi ubeka module in Internet Explorer, evumela ukuthi wena ukubuka Igama eliphelele ikhasi.
Isethi elikhulu amathuluzi for kwamukeleke imenyu isiqalo
Ukungeza of the amathuluzi ezengeziwe wamazwe
Amandla ukushintsha design usebenzisa izikhumba
Amazwana on Classic Shell:
Classic Shell Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... SketchUp Make 17.1.174 2017 futhi 16.1.1450 2016
English, Afrikaans, Українська, Français... Proxifier 3.28 Standard futhi Portable
Converters zomsindo Ithuluzi esikahle ukusebenza audio akwazi futhi amafayela. Isofthiwe isekela umsebenzi yokukhipha of the track wemisindo kusukela CD izinga okusezingeni eliphezulu.